Ny kinova Qt Design Studio 2.0 dia efa navotsotra | Ubunlog
Navoaka sahady ny kinova Qt Design Studio 2.0
Darkcrizt | | sary, Software
Navoaka ny kinova Qt Design Studio 2.0, Ity famoahana ity dia misy fanovana lehibe vitsivitsy, ao anatin'izany ny fitaovana fampandrenesana fianjerana Google Crashpad (rafitra iray amin'ny fakana, fitahirizana, ary fandefasana ireo tatitra momba ny fianjerana taorian'ny fizahana olona avy amin'ny rindranasa mankany amin'ny lozisialy fanangonana ambony).
Raha tsorina, Crashpad dia tsy mamoaka ny tatitra lozam-pifamoivoizana satria misambotra atiny tsy mitongilana avy amin'ny fahatsiarovana ny dingana Qt Design Studio izay tsy nahomby. Noho izany, ny dump dia mety misy fampahalalana saropady toa ny anaran'ny tetikasa.
Ho an'ireo izay tsy mahalala ny Qt Design Studio, tokony ho fantatr'izy ireo izany tontolo iray ho an'ny famolavolana ny interface interface sy ny fampandrosoana ny rindran-tsary miorina amin'ny Qt. Ny Qt Design Studio dia manamora ny fampiasan'ny mpamorona sy ny mpamorona ny prototypes azo ampiasaina amin'ny interface sarotra sy azo refesina.
Ny mpamorona dia afaka mifantoka amin'ny famolavolana sary fotsiny, Na dia afaka mifantoka amin'ny fampivelarana lozika fampiharana aza ny mpamorona amin'ny alàlan'ny kaody QML novokarina ho an'ny famolavolana, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny workflow atolotra ao amin'ny Qt Design Studio, azonao atao ny mamadika ny endrika voaomana amin'ny Photoshop na mpamoaka sary hafa ho lasa prototypes miasa mety handefasana amin'ny fitaovana tena izy ao anatin'ny minitra vitsy.
1 Zava-baovao lehibe an'ny Qt Design Studio 2.0
2 Get Design Studio 2.0
Zava-baovao lehibe an'ny Qt Design Studio 2.0
Iray amin'ireo zava-baovao farany misongadina amin'ity kinova Qt Design Studio 2.0 ity ny fanohanana fanandramana ho an'ny Qt 6 (kinova navoaka andro vitsy lasa izay, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia afaka manatona ny famoahana nataonay Ao amin'ity rohy manaraka ity), hatramin'ny kinova ity ahitana API sary misy sary tsy miankina amin'ny 3D API ny rafitra fandidiana.
Ny fanovana iray hafa izay aseho amin'ity kinova vaovao ity dia ilay fitaovana fanaovana tatitra momba ny bibikely izay efa voalaza tery am-piandohana. Ny fonosana dia misy plug-in hanangonana telemetry, mitovy amin'ilay omena ao amin'ny Qt Creator.
Ny plugin dia mifototra amin'ny rafitra KUserFeedback novolavolain'ny tetikasa KDE. Amin'ny alàlan'ny fikirakirana, ny mpampiasa dia afaka mifehy izay karazana data ampitaina amin'ny mpizara ivelany ary misafidy ny haavon'ny antsipirian'ny telemetry. Raha tsy misy izany, tsy mandeha ny fanangonana telemetry, fa raha maniry izy ireo, ny mpampiasa dia afaka mandray anjara amin'ny fanangonana fampahalalana tsy fantatra anarana momba ny fampiasana ny vokatra hanatsarana bebe kokoa ny kalitaony.
Izahay dia manara-maso ny fahita matetika sy ny fotoana fampiasana ireo fiasa manokana ao anatin'ny fampiharana. Amin'ny fanomezana anay an'ity angon-drakitra ity dia manampy anay ny mpampiasa hanatsara ny kinova Qt Design Studio amin'ny ho avy. Azontsika tsara kokoa ny fampiasan'ny mpampiasa anay ny vokatra sy ny maha-zava-dehibe ny endri-javatra manokana.
Nanampy fanohanana amin'ny famoronana sary kely, miaraka amin'ny fanampian'izy ireo, ohatra, afaka mamorona sosokevitra sy kisary topi-maso mamerina ireo singa interface ianao.
Ny fanohanana fanandramana ho an'ny Qt Bridge dia napetraka mba hanafarana endrika avy amin'ny Figma.
Nanampy ny fahaizana mamorona tetikasa ho an'ny rafitra Qt ho an'ny MCU, mamela anao hamorona rindranasa ho an'ny microcontrollers sy fitaovana kely herinaratra.
Ny interface interface amin'ny famoronana effets 2D dia novaina.
Farany, raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ity kinova vaovao ity, ary koa ny rindrambaiko, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Get Design Studio 2.0
Ho an'ireo izay liana, azafady mba fantaro fa ny kinova ara-barotra sy ny fanontana fiaraha-monina an'ny Qt Design Studio. Ny kinova ara-barotra dia omena maimaim-poana ary mamela ny fizarana ireo singa interface efa voaomana ho an'ireo manana fahazoan-dàlana ara-barotra ho an'ny Qt ihany. Ny Community Edition dia tsy mametraka famerana ny fampiasana azy, fa tsy mampiditra modules amin'ny fanafarana sary avy amin'ny Photoshop sy Sketch.
Ny fampiharana dia kinova manokana an'ny tontolo Qt Mpamorona, namboarina avy amin'ny tahiry iraisana. Ny ankamaroan'ny fanovana manokana Qt Design Studio dia mankany amin'ny kaody kaody mpamorona Qt Mpamorona lehibe. Ny Photoshop sy ny Sketch fampidirana dia manana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Navoaka sahady ny kinova Qt Design Studio 2.0
Tonga ny Qt Creator 4.14 miaraka amin'ny fanohanan'ny QT 6 sy maro hafa
Reveal.js, mamorona fampisehoana amin'ny alàlan'ny CSS sy HTML ao amin'ny Ubuntu 20.04